CIN Khabar नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच भनाभन
नेकपा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच भनाभन पद छाड्न ओलीलाई स्थायी कमिटि बैठकमा शीर्ष नेताकै दवाव
सीआईएन मंगलबार, असार १६, २०७७, ०८:३२:००
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हट्न दवाव परेको छ ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपालसहितका १८ जना स्थायी कमिटि सदस्यहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिकता गुमाएको भन्दै पद छाड्न भनेका हुन् ।
मंगलबार बसेको स्थायी कमिटि बैठकमा बोल्ने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सबै नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पद छाड्न भनेका हुन् ।
सुरुमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्त्रीबाट हटाउन लागेको भनेर केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको आधार पेश गर्न आग्रह गर्दै पद छाड्न आग्रह गर्नु भएको थियो । ओली आउन ढिलाइ भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु गर्नु भएको थियो । प्रचण्डले बोल्दाबोल्दै ओली बैठकमा प्रवेश गर्नु भएको थियो ।
‘तपाईँले भारतले र पार्टीभित्र मलाई हटाउने खेल सुरु भयो भन्नु भएछ । त्यसको आधार के हो ? त्यस्तो खेल भारतका तर्फबाट भए राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिनुपर्ने तपाईँले खेलको कुरा गर्नुभयो ।’ बोल्ने क्रममा प्रचण्डले भन्नुभयो ‘तपाईँको अभिव्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिकता अब रहेन पद छाडनुहोस् ।‘
अध्यक्ष प्रचण्ड बोलेपछि वरिष्ठ नेता खनाल, नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल सबैले राजीनामा दिन भन्नुभएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले नामक दल दर्ता कसले किन गर्‍यो भन्दै त्यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीसँग माग्नु भएको थियो । झापाकी सन्ध्या तिवारीको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी दर्ता भएको विषयमा बैठकमा चर्चा भएको थियो ।
नेकपा एमाले दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा दुई दिनअघि आवेदन परेको सुन्नमा आएको भन्दै प्रचण्डले नै विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो । 'एमाले नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको छ।' प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कसले किन दर्ता गर्न लागेको हो ?’
लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनु भएको थियो ।
'कसले कहाँ दल दर्ता गर्छ, मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? यसअघि गोलाप किराँतीले कसको निर्देशनमा गर्नु भएको थियो र ? ' प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गर्नु भएको थियो । फेरि प्रधानमन्त्री ओली बोलिरहेकै बेला प्रचण्डले 'किराँतीले त मसँग विद्रोह गरेर पार्टी दर्ता गरेको हो ? के अहिलेको अबस्था त्यही हो त ? ' भन्दै प्रतिपश्न गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा नेकपा एमाले नामक दल दर्ता प्रक्रियामा अगाडि बढेको दावीसमेत गर्नु भएको थियो । अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी फुटाउन सबै तयारी पूरा भएको र अन्तिम समयमा रोकिएको समेत नेताहरुले आरोप लगाए ।
अर्को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन पार्टीभित्र कसले कहाँ षड्यन्त्र गर्यो भन्ने प्रष्ट खुलाउनु भएन । तर, 'भारतीय सञ्चारमाध्यमले दिइरहेका खबरबाट प्रष्ट हुँदैन र ?' भन्दै प्रश्न गर्नु भएको थियो । ओलीको जवाफ थियो, ‘तपाईहरुले मेराविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ, खुमलटारमा बसेर रणनीति बनाएर यहाँ आउनुहुन्छ । भारतीय मिडियामा त्यही भाषामा समाचार आइरहेका छन् । दुवैतर्फको भाषा कसरी हुबहु मिल्छ ?
दुई अध्यक्षबीच यो ढङ्गले छलफलमा चर्काचर्की भएको र सवालजवाफ भएको पहिलो पटक भएको एक नेताले सीआईएनलाई जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र आफूविरुद्ध घेराबन्दी गरिएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो ।
नेता नेपालले प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बोलेको कुराले पार्टीकै मर्यादा घटेको आरोप लगाउनुभयो । नेता नेपालले तपाईंबाट सरकार र पार्टी चल्न सक्दैन, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुस् भन्नु भएको थियो ।
ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल भने बोल्नु भएन । प्रचण्डलेईश्वर पोखरेललाई केही राख्नुस् भन्दा पोखरेलले नबोल्ने बताउनु भएको थियो ।
ढिलो गरी बैठकमा आएका ओली नेताहरूसँग कठोर सवाल–जवाफ गरेपछि बैठकको बीचमै निस्केर दोस्रोपटक राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुग्नु भएको थियो । बोल्ने सबै १८ सदस्य ओलीको विपक्षी खेमाका नेताहरु हुन् । बुधवार ओली पक्षका नेताहरुले बोल्ने छन् ।
बैठकमा त्याग कटाक्ष
बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजीनामा दिएर त्याग गर्नुहोस पनि भन्नु भएको थियो । त्यसमा ओलीले सबै नेताहरुलाई जवाफ फर्काउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो , ‘प्रचण्डजी ३२ वर्षदेखि आफू निरन्तर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, माधवजी १६ वर्ष महासचिव हुनुभएकै हो,झलनाथजी १३ वर्षसम्म महासचिव र अध्यक्ष हुनुभएको हो, पार्टी कहाँ पुगेको थियो आफैँ समीक्षा गर्नुस् । तपाईं बडो त्यागको कुरा गर्नुहुन्छ, म अर्कोपटक प्रतिस्पर्धामा आएर चुनाव लड्दिनँ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न भनेकै छु । के चाहियो त्यो भन्दा । ’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १६, २०७७, ०८:३२:००